वडा अध्यक्षको चर्तिकला : अर्काकी श्रीमतीसँग शारीरिक सम्पर्क गर्दागर्दै रंगेहात पक्राउ ! - Sagarmatha Online News Portal
काठमाडौं । श्रीतमी र घरपरिवारलाई सुखसयलमा राख्नको लागि धेरै नेपालीहरु विदेशिएका छन् । ४५ डिग्रीभन्दा बढि तापक्रममा रगत गनाउञ्जेल पसिना बगाएर खाइनखाई पैसा कमाई रहेका छन् ।
अनि यता श्रीमती चाँहि परपुरुषको अगालोमा मोजमस्ती गरिरहेको खबर श्रीमानले सुन्दा कस्तो होला ? त्यत्तिमात्र होइन परपुरुषसँग शारीरिक सम्पर्क गर्दागर्दै प्रहरीले रंगेहात पक्राउ गर्यो भनेको सुन्दा श्रीमानको मनमा के बित्दो हो ? भर्खरै भक्तपुर जिल्लामा यस्तै अपत्यारिलो घटना भएको छ । सुन्दा पनि छि … त्यस्तो पनि हुन्छ र ? भन्ने धेरैको मुखबाट निस्किन्छ । तर घटना यर्थाथ हो ।
रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष गोपालबहादुर माझी अर्काकी श्रीमतीसँग शारीरिक सम्पर्क गर्दागर्दै रंगेहात प्रहरीले पक्राउ गरेपछि यस्तो अपत्यारिलो घटना सार्वजनिक भएको हो । कतै जनप्रतिनिधीले पनि यस्तो गर्छ र ? भन्ने धेरैको मनमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । घटनाक्रम पनि अचम्म अनि अपत्यारिलो छ । भक्तपुरको चारदोबाटोस्थित माझी र विवाहित महिला गएको मंसिरदेखि कोठा भाडामा लिएर बसिरहेका थिए । उनीहरुले वरिपरिकालाई श्रीमान श्रीमती भनेर ढाटेका थिए ।
तर, जब ती महिलाका श्रीमान विदेशबाट नेपाल आए, त्यसपछि उनीहरुको चर्तिकला केहि दिन पनि टिक्न सकेन् । महिलाको श्रीमानले यस्तो कुरा सुईको पाएपछि प्रहरीको सहयोग लिए । वडा अध्यक्ष माझी र उनकी श्रीमतीलाई शनिबार राती साढे ११ बजे शारीरिक सम्पर्क गर्दैगर्दा रंगेहात प्रहरीले पक्रिएपछि उनीहरुको कर्तुत छताछुल्ल भएको हो ।
माझी र महिलालाई महानगरिय प्रहरी प्रभाग ठिमीको हिरासतमा राखिएको छ । उनीहरु विरुद्ध बहुविवाह मुद्धा दायर गरिने बताइएको छ । श्रीमती र छोरोलाई सिन्धुलीस्थित तीनपाटन माईतीमा छोडेर विदेशिएका थिए । तर, उनी विदेशिएको केहि वर्षपछि श्रीमतीको विषयमा गाईगुई हल्ला भने सुनेका थिए । यथार्थ बुझ्न नेपाल आउँदा छाँगाबाट खसेझै भए । आखिर उनले सुनेको कुरा सत्य सावित भयो ।
Published On: ८ असार २०७६, आईतवार 1662पटक हेरिएको